လှေပုံသဏ္ဍာန်ယောဂပို့စ်(Boat Pose) ကို စနစ်တကျလေ့ကျင့်ပေးခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သောသော အကျိုးကျေးဇူးများ
Improving your life. Full-length shot of caucasian woman standing in Boat pose, Paripurna Navasana while practicing yoga outdoors, inagarden. Healthy lifestyle and relaxation concept
Boat pose ဆိုတာ အစာခြေစနစ်ကို အားကောင်းစေသာ ယောဂပို့စ်အမျိုးစားတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းက အစာမကြေခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့် ဝမ်းဗိုက်မှာ ပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာတွေကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ယောဂကျင့်ရတာကို ဝါသနာပါသူတွေအတွက် ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားကိုလည်း အားကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။
Boat Pose ကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ယောဂဖျာပေါ်မှာ ဒူးထောက်ပြီး သင့်ရဲ့ ခြေဖျားတွေပေါ် ညီညာစွာထိုင်ပါ။ ကျောကို ဖြည်းဖြည်းချင်းဆန့်လိုက်ပြီး တင်ပါးဆုံရိုးကို ကြိတ်မိတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့။ ပြီးတာနဲ့ ခြေထောက်တွေကို ပြန်လည် ဆန့်ထုတ်ပါ။ ပတ်ဝန်းကငျ်က အနှောင့်အယှက်မှန်သမျှကို ဖယ်ရှားထားပါ။ ရင်ဘတ်အပေါ်ပိုင်းကို ဆန့်တက်ပြီး ကြွထားပါ။ သင့်ပုခုံးကို အနောက်ဘက်ဆီသို့ တစ်ဖက်တစ်ချက်ဆီ လျှောပြီး လည်ပင်းနှင့် ခေါင်းကို ရှည်ရှည်ထားပါ။
အဆင့် (၁) – သင့်လက်နှစ်ဖက်ကို ဆန့်၍ ဒူးပေါ်မှာ ညင်သာစွာကိုင်ပါ။ သင့်ရဲ့ လက်မောင်းတွေက ကြမ်းပြင်နဲ့အပြိုင်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ သင့်ခြေထောက်တွေကလည်း ကြမ်းပြင်နဲ့အပြိုင်ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
အဆင့် (၂) – သင့်ရဲ့ ခြေထောက်ကို ယှဉ်ထားပြီး သင့်လက်တွေက ဒူးတွေကို သိုင်းဖက်ထားပါ။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ သင့်လက်တွေကို ကြမ်းပြင်နဲ့အပြင် တန်းလိုက်ပြီး ခြေထောက်တွေကို ထိပြီး အားရှိအောင်ထားပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ နောက်ကျောကို နည်းနည်းလှန်လိုက်ပါ။
အဆင့် (၃) အပေါ်က ညွှန်ကြားချက်တွေအားလုံးကို စိတ်ထဲမှာ မှတ်ထားပါ။ သင့်ခြေထောက်တွေကို ဖြောင့်ဖြောင့်ထားပါ။ ကြမ်းပြင်နှင့် ၄၅ ဒီဂရီအကွာမှာ သန်မာသော ခြေထောက်တွေကို ထိန်းသိမ်းပါ။ ၎င်းတို့ကို မျက်လုံးတစ်ဝိုက်တွင်ထားပြီး သင့်စွမ်းအင်ကို နေရာတိုင်းမှာ စီးဆင်းနေအောင်ထားပါ။ အသက်ပြင်းပြင်းရှူပြီး အေးအေးဆေးဆေးနေပါ။ ဝမ်းဗိုက်၊ ခြေထောက်၊ တင်ပါးဆုံရိုးနှင့် နောက်ကျောစတဲ့ နေရာအားလုံးမှာရှိတဲ့ ကြွက်သားအားလုံးကို စိန်ခေါ်ပါ။
Boat Pose ကို စနစ်တကျလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် သိသာထင်ရှားသော အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိစေပါတယ်။ ၎င်းတို့က
ဝမ်းဗိုက်၊ တင်ပါးဆုံရိုးနှင့် ကျောရိုးကို အားကောင်းစေခြင်း
ကျောက်ကပ်၊ ဆီးကျိတ်၊ သိုင်းရွိုက်နှင့် အူတွေကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ခြင်း
စိတ်ဖိစီးမှုကို သက်သာစေခြင်းနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုစွမ်းအားကို တိုးတက်စေခြင်း
အဆုတ်စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း (ရင်ဘတ်ကို ကြွထားခြင်း)
ဒီယောဂပို့စ်ကို ရှောင်ရှားပေးရမယ့်လူတစ်ချို့ကတော့ –
လည်ပင်းပြဿနာရှိခြင်း (သို့) ဒဏ်ရာရခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ စသည်တို့ကတော့ boat pose ကို မလုပ်သင့်တဲ့ လူတွေပါ။ Boat pose နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။